Hafatry ny talen'ny fizahan-tany afrikanina
Home » Lahatsoratra farany farany » Birao fizahantany afrikanina » Hafatry ny talen'ny fizahan-tany afrikanina
Birao fizahantany afrikanina • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao • Seychelles Madagascar Malgache • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Alain St.Ange, filohan'ny Birao fizahantany afrikanina ary ny minisitry ny fizahantany, sidina sivily, seranan-tsambo ary ny ranomasina any Seychelles teo aloha no namoaka ity hafatra ity androany.
"Ny fizahantany dia mila mihoatra ny programa tarihin'ny IMF; mila vondron'olona maro an'isa manana andraikitra lehibe kokoa, toa ny UNWTO, izy ireo handray anjara amin'ny fanarenana. "
Ny indostrian'ny fizahantany sy ny fitsangantsanganana dia mitoetra ho ampahany lehibe amin'ny toekarena manerantany. Manome asa ho an'ny olona efa ho 300 tapitrisa izy ireo, manohana fianakaviana tsy tambo isaina, ary mahatratra 10 isan-jaton'ny harin-karena faobe global. Taorian'ny vokatra ratsy nataon'ny COVID-19 teo amin'ireo indostria ireo, indrindra ho an'ireo fanjakana nosy kely izay miankina betsaka amin'ny fizahan-tany dia maro no mitady ny jiro any amin'ny faran'ny tionelina.
Ny risika avo lenta sy ny fahalemen'ny firenena izay miankina betsaka amin'ny sehatra na indostria manokana amin'ny famoronana harena dia tsy azo hamaivanina. Na izany aza, ny faharetan'ny toekarena rehetra izay mandray fanao maharitra, ary mametraka ny olona ho ivon'ny fiezahany hampandroso, dia hametraka ireo firenena marefo amin'ny toerana tsara lavitra kokoa mba ahitana areti-mandringana toy ny Covid-19, ary hihemotra.
Izany no toe-javatra nisy an'i Seychelles taorian'ny krizy ara-bola sy ara-toekarena tamin'ny 2008. Saingy, tamin'ny alàlan'ny fandefasana fiarahamonina COVID-19 vao haingana tao Seychelles, toerana iankinan'ny toekarena eo an-toerana ny fizahan-tany, ary ny rafitry ny fikarakarana ara-pahasalamana voaomana tsara hiatrehana ny valanaretina any an-toerana, ny fananganana indray sy fanamafisana ny toekarena dia mila mihoatra ny programa tarihin'ny IMF; Izy io dia manome antoka ny vondrona mpiaramiasa iraisam-pirenena mifandraika amin'izany, toy ny UNWTO, mba handray anjara amin'ny ezaka fanarenana sy fananganana indray ny orinasan'ny fizahan-tany sy fizahan-tany mba hiverina amin'ny tongotr'izy ireo.
Fotoana tokony hijeren'ny fanjakana mpikambana ao amin'ny UNWTO amin'ny fomba betsaka ny maha-mpikambana azy ireo ary handray soa mivantana avy amin'ny Organisation mandritra io fotoan-tsarotra io. Covid-19 dia nanantitrantitra ny filàna mafy ho an'ireo Firenena miankina amin'ny fizahan-tany hanamafy ny fandrindrana ireo sehatra samihafa hahazoana vokatra mahomby kokoa. Tsy afaka mitohy ny toe-tsaina silo raha te hanana mpandresy amin'ny indostrian'ny fizahantany sy fizahan-tany isika.
Mandrosoa, ny politika manangana sy mampiroborobo ny faharetana ary ny fomba fanao fampandrosoana maharitra dia tokony hotarihina. Rehefa manao veloma ny taona 2020 isika ary miarahaba antsika amin'ny 2021, ny toeran'ireo fizahantany dia tokony hanaiky ny filàna mametraka ny fampandrosoana sy ny fizahantany ao anaty harona iray ihany mba hamerenana ny fitomboan'ny harinkarena ary hitondra ny fahafaha-miasa ilaina amin'ny vahoaka. Ny fampandrosoana dia lakilen'ny fitomboana ara-toekarena ary ny fizahantany no fiara mampihetsika azy. Ny 'ara-dalàna vaovao' dia tokony hanakana ny fiezahana hanandrana hamerina ny zava-nisy talohan'ny Covid19. Ny fanamainana ny fizahan-tany dia nitondra ny fianjeran'ny tontolon'ny fiaramanidina tsy mbola nisy toy izany teo aloha.
Mila mpitondra fizahantany za-draharaha ny fizahantany hitarika ity indostria tena ilaina ity ankehitriny mihoatra ny taloha.
Mirary taona vaovao milamina sy salama ary miroborobo ny tsirairay.